Soo dejisan Audacity 2.3.3 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Audacity
Dhiiran – editor caan ah audio la set badan oo ah hawlaha. software The waa inay awoodaan inay qoraan codka nool ka makarafoonka, USB ama Firewire qalabka taageerada diiwaanka multichannel iyo gacanta oo ka mid ah heerarka mugga loo baahdo. Dhiiran u saamaxaaya in ay soo saarto dhawaaq xagga danbe ah, cabudhinaaya qufac ama taahaygu, goolka barbaraha heerka guud ee codka iyo in laga takhaluso oo ka mid ah cilladaha kale qoraalana ka warbaahin ama dhawaaqa qalabka audio. software waxay leedahay set badan oo ah qalab si edit iyo isku files dhawaaqa. Sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dhiiran in ay ku xidhmaan ku daro kala duwan si loo horumariyo shaqada la files audio.
Xogta dhawaaqa oo laga helay ilo kala duwan
Isku daraa ee files audio
processing wadajira of files badan
Removal cilladaha qayladii
Digitizes diiwaanka analog ah
Faallo ku saabsan Audacity
Audacity Xirfadaha la xiriira